Dhageyso Axmed Madoobe Waa Camiil U Shaqeeya Itoobiya. – Bogga Calamada.com
Dhageyso Axmed Madoobe Waa Camiil U Shaqeeya Itoobiya.
February 13, 2018 6:01 am Views: 509
Gudoomiye ku xigeenkii hore ee Baarlamaanka dowlada Saliibiyadda Kenya Murtadka Lagu magacaabo Faarax Mucalim ayaa ka hadlay shir magaalada Nayroobi uga furmay dowlada Xabashida Itoobiya iyo Ururka ONLF.
Faarax Mucalim ayaa sidoo kale ka hadlay maamul gobaleedyada dowlada Xabashida Itoobiya ay ka dhisatay dalka Somalia sida Puntland,Somaliland,Galmudug,Konfur Galbeed,Hirshabeelle iyo Jubbo Land waxa uuna sheegay in guud ahaan maamuladaasi ay ka shaqeeyaan danaha Itoobiya.
Faarax Mucalim ayaa si gaar ah farta ugu fiiqay Murtad Axmed Madoobe oo maamulkiisa dowlada Saliibiyadda Kenya ku ilaaliso magaalada Kismaayo waxa uuna carabaabay in Axmed Madoobe uu yahay Camiil xilli walbo ay ku shaqeysato dowlada Xabashida Itoobiya.
Halkan Ka Dhageyso Codka Faarax Mucalim.